शंकर लामिछाने र अम्बर गुरुङबीचको सम्बन्ध बुझ्न लामिछानेको ‘विम्ब–प्रतिविम्ब’ को अम्बर गुरुङ पढ्नुपर्छ  । लामिछानेको गुरुङप्रतिको आत्मीयता र उनको प्रतिभा यसमा झल्केको छ, ‘म अम्बर हुँ तिमी धर्ती, लाखौँ चाहे पनि हाम्रो मिलन कहिल्यै नहोला  ।
झन्डैझन्डै कौरव–पाण्डवको शैलीमा करिब दुई घण्टासम्म निरन्तर आक्रमण भइरहयो । अहिले पनि मलाई के कुरामा आशंका लाग्छ भने डेढ–दुई सय मिटर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा नलगी किन कान्तिपुरमै ल्याइए ती राहदानी भरिएका बोराहरू ? यो कतै कान्तिपुरमाथिको नियोजित षड्यन्त्र त थिएन ? आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।